«Show your team spirit» : amboara 20 no ho zaraina eny Ankatso | NewsMada
«Show your team spirit» : amboara 20 no ho zaraina eny Ankatso
Hotontosaina, eny amin’ny kianja Ankatso, ny 11 sy 12 jona izao, ny andiany fahatelo amin’ny “show your team spirit”. Lalao ara-panatanjahantena natokana ho an’ireo mpiasa amina orinasa. Hiavaka ity andiany ity satria amboara 20 be izao, no indray ho zarain’ny Pro Active.com, ho an’ireo mpandray anjara. Hahazo amboara avokoa ireo telo voalohany isaky ny taranja.
Ankoatra ireo mpandresy, hahazo ihany koa ny mpanohana “supporteurs” mahay indrindra. Eo koa ny orinasa manana ny fahaiza-milalao sy manaja ny fitsipika sy ny mpifanandrina aminy na ny “fair-play”. Orinasa 25 no hiatrika ny fihaonana, amin’ity.
Taranja 6 no hifaninanana dia ny baolina kitra lalaovina olona 7, ny basikety sy ny volley-ball, iarahan’ny lahy sy vavy, ny hazakazaka mifampitohy, ny “tir à la corde” ary ny kobara. Tsy afaka mandray anjara ireo olona manana kara-pilalaovana eny anivon’ny seksiona na ligy.
Tanjon’ny mpikarakara amin’ity ny firaisankina sy ny fifankahalalana eo amin’ny samy mpiasa ary koa ny fandraisana anjaran’ny rehetra na mpilalao na mpanohana. “Show your team spirit” ny teny filamatra amin’ity.